Ụlọ ihe eji eme ụlọ, ndị na -ebunye ya - China Car Floor Mat Material Manufacturers
Akụkụ kachasị mkpa nke akwa akpụkpọ anụ akpụkpọ anụ PVC bụ ịtọgbọ n'ime ikuku ụgbọ ala dị elu, yana ọnụ ahịa, enweghị ntụpọ agaghị achịkọba uzuzu, dị mfe nhicha, mana ọ naghịkwa adị mfe slide, nchekwa dị elu.
Akpụkpọ anụ akpụkpọ anụ ọkụ ọkụ PVC maka akwa akpaaka
Akpụkpọ ụkwụ akpụkpọ anụ ụgbọ ala nwere njiri mara nke na-egbochi uzuzu, nke na-anaghị amị amị na nke na-eguzogide. Ejiri iji chọọ ụgbọ ala mma ga -eme ka ụgbọ ala gị maa mma.
Ezigbo Quanlity 3D ụgbọ ala maka akwa ụgbọ ala
Akpụkpọ ụkwụ ụkwụ ụgbọ ala nke Bensen mepụtara na-enwe mmekọrịta gburugburu ebe obibi, dị mma, na-eku ume ma na-anaghị amị amị. Ị nwere ike nye ihe nlereanya ahụ iji zụta ngwaahịa emechara ma ọ bụ zụta akụrụngwa iji mee nke gị. A na -eme akwa ụgbọ ala Bensen iji belata ihe egwu zoro ezo nke akwa ụgbọ ala kpatara.
Bensen na-ewepụta ihe eji akwa akwa ụgbọ ala dị iche iche, dị mma na gburugburu ebe obibi, nchekwa na enweghị mgbada.
N'ogbe Universal Car Mat Kapetị PVC Floor Mat
Ihe akwa akwa ụgbọ ala Bensen nwere ihe mgbochi mgbochi/mgbochi mgbochi, ebe ha nwere ala na-anaghị amị amị maka nchekwa kacha mgbe ị na-anya ụgbọ ala.
A na-ejikarị akwa akpụkpọ anụ akpụkpọ anụ akpụkpọ anụ akpụkpọ anụ kpuchie ya, akwa oyibo dị n'etiti, yana akwa ala nke ụlọ ọrụ na-anaghị amị amị.
High Quality Akpụkpọ anụ waterproof Ft Car Ụkwụ ute ihe
Ihe akpụkpọ ụkwụ akpụkpọ ụkwụ akpụkpọ ụkwụ dị ugbu a na-abụkarị akpụkpọ anụ, akpụkpọ ụkwụ ihe a dị mma ma dị nro, ikuku dị elu, enweghị mgbochi na-eyi, bụ ọnụ ahịa dị elu nke akwa akwa ụgbọ ala, bụ ezigbo nhọrọ maka ọtụtụ. nke ndị nwe ụgbọ ala.
Ọdịmma dị elu dị iche iche PU Car Foot Mat Mat
A na -ejikarị ihe mkpuchi akwa akpụkpọ anụ akpụkpọ anụ akpụkpọ anụ, ọ nwere akwa mkpuchi pụrụ iche nwere ụdị ọka sitere n'okike na ihe na -egbu maramara.
Akpụkpọ ụkwụ ụkwụ ụgbọ ala dị mma ma na -adigide, na -enwe ezigbo elasticity nke akpụkpọ anụ dị n'elu, nwee ahụ iru ala na ntụsara ahụ maka ịnya ụgbọ ala ogologo oge. ihe XPE siri ike nke ukwuu, nchedo gburugburu ebe obibi, enweghị isi, kamakwa iji gbochie akwa na akwa, na-adigide.
Okomoko Diamond Auto Ụkwụ ute ụfụfụ mpịakọta maka Car Ft Mats
Matskwà ala ụgbọ ala na -ejikọ mmịkọ mmiri, mmịkọ uzuzu, iwepụ unyi na mkpuchi ụda iji gbochie mwepụ n'etiti ipigide, breeki na trotul. Zere ihe ize ndụ nchekwa. Zere ihe ize ndụ nchekwa.
Ihe na -adịgide adịgide ma na -echebe Diamond Car Mats PVC Akpụkpọ anụ
Ihe mkpuchi ụgbọ ala Bensen na -ewepụkwa mkpọtụ fọdụrụ na ụda na -ada n'ime ụgbọ ala ahụ, na -agba mbọ hụ na agbanyeghị nchedo nyocha.